प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी हारेको र प्रचण्ड-नेपाल ले बाजि जितेको खुलासा ! कारण यस्तो - News21Nepal
प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी हारेको र प्रचण्ड-नेपाल ले बाजि जितेको खुलासा ! कारण यस्तो
February 9, 2021 news21nepalLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी हारेको र प्रचण्ड-नेपाल ले बाजि जितेको खुलासा ! कारण यस्तो
काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको वकालत गरेकाले बाजी हारेको बताएका छन् । सोमबार एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केपीले प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्दै संविधान कुल्चिएकाले वाजी हारेको बताएका हुन् ।
ओलीले प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चने काम गर्नुभयो । प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्न थाल्नुभयो । उहाँले बाजी हार्नुभयो । उहाँ कलंकित पनि हुनुभयो इतिहासमा’, प्रचण्डको भनाई छ । उनले अव ओलीले जित्ने कुनै सम्भावना पनि नरहेको बताए । ‘उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना नै छैन । हामी संविधान, लोकतन्त्र, शान्ति र संघीयताको पक्षमा उभियौ, त्यसकारण हामीले लडाई जित्यौ ।
ओली एकपछि अर्को हार्नुभन्दा विकल्प छैन । हाम्रो जित कसैले रोक्न सक्दैन’ प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्डले पार्टी एकता घोषणा गरेको ३ वर्ष बित्दानबित्दै पार्टी विभाजनको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले पद र कुर्सीका लागि नभई विचार र सिद्धान्त, सिस्टम र प्रणालीका निम्ति लडाई भइरहेको बताए । ‘पार्टी, आन्दोलन भनेको विचारबाट निर्देशित हुन्छ । निश्चित विचार र राजनीतिक कार्यदिशाद्धारा हुन्छ पार्टी’ प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले त्यही कार्यदिशामा ओलीले प्रहार गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए ।कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीले लडाई गरिरहेको बताए । त्यस्तो प्रवृत्ति पार्टीमा नरहने बताए । ‘केपी ओलीको नयाँ–नयाँ अवतार चाहिएको छैन । एउटै केपी ओलीबाट आजित भइसक्यौं केपी ओलीको नयानयाँ अवतार आयो भने यो देश थिलथिलो भएर सिद्धिन्छ’, अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो ।
स्रोत : रातोपाटि
Tagged प्रधानमन्त्री ओलीले बाजी हारेको र प्रचण्ड-नेपाल ले बाजि जितेको खुलासा ! कारण यस्तो
प्रधानमन्त्री ओलि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष कि हिन्दु महासंघको ? आखिर खुल्यो वास्तविक रहस्य
February 7, 2021 news21nepal
लगानी गर्नु पुर्ब ,,अन्डरभ्यालु शेर के हो र यो कसरी चिन्ने ?
October 25, 2020 news21nepal